I-salmon ephuzi ebhakabhaka ibhakabhaka ehhavini, nemifino kanye noshizi ogayiwe
Ukudla nokuphuza, Amathiphu wokupheka
I-salmon ye-Pink yabizwa ngokucophelela ngokuphelele, itholakala kakhulu, uma ufaka imifino eyengeziwe kuwo. Ngaphezu kwalokho, ngaphambi kokulungiselela inhlanzi ebomvu, kunconywa ukuthi uyinciphise amahora amaningana ku-marinade enomsindo ngokumuncu.
I-saumon ye-Pink egosiwe e-ovini kuhhavini: izithako ezidingekayo
Amazambane amancane yizilimo eziyizigaxa eziyisikhombisa ezincane;
Izaqathe ezintsha - izingcezu ezinkulu ezintathu;
Utamatisi avuthiwe - ama-medium amabili;
I-iodized sosawoti - i-pinch encane;
Ushizi - amagremu ayikhulu namashumi amahlanu;
Amafutha omifino - izinkezo ezintathu ezinkulu;
Ukhilimu omuncu amafutha - amagremu amahlanu;
Anyanisi - izinhloko ezintathu eziphakathi;
I-salmon ye-pink iyintsha - izingcezu ezimbili ezinkulu.
I-saumon ephuzi ephuziwe e-ovini: ukucubungula izinhlanzi
Ukuze ulungise le dish, kutuswa ukuthenga inhlanzi yonke efriziwe egcwele. Ngakho-ke, kufanele ulinde ukudonsa okuphelele kwe-salmon e-pink, ugeze ngokugcwele, ususe zonke izakhi ezingadingekile (ikhanda, umsila, insides, amathini, njll), bese ubeka amahora amabili ku-marinade.
Izithako ezidingekayo ze-marinade:
I-Lemon - eyodwa eyodwa;
Usawoti odidiziwe - 1/3 we-spoon encane;
I-Ground pepper - i-pinch embalwa;
Izinongo zezinhlanzi - ekuqondeni komuntu siqu;
Imifino esisha - ibhola elikhulu;
I-Leek - imicibisholo emihlanu.
Inqubo yokulungiselela ama-marinade
I-lemon kuyadingeka ukuba icindezele ngokugcwele esitsheni, bese ufaka usawoti odicilelwe i-ididi, i- pepper emnyama, ama-herbs aqoshiwe, ama-leeks nanoma yiziphi izinongo. Zonke izithako kufanele zixutshwe, emva kwalokho ingxube enomphumela ephunga kufanele ihlanganise izinhlanzi ezimbili eziphathwayo.
I-saumon ye-Pink egosiwe e-ovini kuhhavini: ukulungiselela imifino
Amazambane abancane, izaqathe ezintsha, utamatisi ovuthiwe kanye anyanisi badinga ukuhlanza okuhle, ususe ikhasi kanye ne-husk, bese uthatha ama-cubes noma imibuthano. Ngemuva kwalokho, yonke imikhiqizo, ngaphandle kwamatamatisi, kufanele ifakwe esitsheni, ifafazwe ngesamba sosawoti e-iodidi futhi ixutshwe kahle ngesandla.
I-saumon ephuzi ebomvu egoliwe kuhhavini: ukwakheka kwesidlo
Ngemuva kwamahora amabili, inhlanzi eqoshiwe kufanele idluliselwe ngokuphelele emgodini wokubhaka, lapho isilwane esinamahlumela esinobuciko kufanele sibekwe khona kuqala. Okulandelayo nge-salmon e-pink kuyadingeka ukuba ubeke yonke imifino eqoshiwe futhi eqoshiwe. Kusukela kubo kubalulekile ukusabalalisa ngokunembile utamatisi abavuthiwe, okuyinto esikhathini esizayo ezigcwele kakhulu ukhilimu omuncu omuncu. Ngaphambi kokuba uhlanganise isilwane ngokuqinile, ungqimba olukhulu lwama-cheese aluhlaza kufanele longezwe nesidlo.
Indlela yokupheka inhlanzi epholiseni kuhhavini: ukwelashwa kokushisa
I-tray ne-salmon ebomvu nemifino kufanele ifakwe kuhhavini elishisayo ngaphambi kwamadireji ayikhulu namashumi ayisishiyagalolunye, lapho isidlo kufanele sibhekwe cishe imizuzu engamashumi amahlanu.
Hlela ukukhonza kokudla etafuleni
Ngemuva kokuba inhlanzi nemifino ibe lula, kufanele zisuswe kuhhavini, zisuswe emhlobheni wekhalenda bese zifaka isidlo esikhulu esiphezulu, esizobe sihlotshaniswa nge-lemon, imifino kanye neminye imifino ehlutshiwe.
Kungani amazambane abe mnyama ngemva kokupheka futhi lokhu kungavinjelwa kanjani?
Inhlanzi ibhakabhaka. Indlela yokupheka inhlanzi eluhlaza okwesibhakabhaka?
Indlela yokupheka izinhlanzi ekhaya
Ungenzenjani. Ukwelashwa kwa-Israyeli
Le filimu "Life Adele": Umqondisi ukubuyekezwa, abadlali kanye izindima
Ukunakwa, amavukuzi kuleli zwe! Izimali ezivela imvukuzane
Ukwakhiwa kwezindlu kusukela aerocrete izandla siqu: izici, ukubala kanye nezincomo
"Antigrippin": Izibuyekezo - "Super!"